बलिउडकी प्रियंकाले अाफू यौन शोषणको शिकार बनेकाे बारे मुख खाेलिन् - VOICE OF NEPAL
बलिउडकी प्रियंकाले अाफू यौन शोषणको शिकार बनेकाे बारे मुख खाेलिन्
२ बैशाख २०७६, सोमबार ११:३९ 617 ??? ???????
कतिपय महिलाहरु यौन शोषणको शिकारमा परेका छन् । जसमध्य केहीले उक्त विषयलाई बाहिर ल्याएको छ त कतिपयले लुकाएर राखेको छ । पछिल्लो समय आफू शोषणमा परेको कुरामा विस्तारै बोल्न थालेको छ ।
यौन शोषणमा विश्वका चर्चित व्यक्तिहरु पनि परका छन् । यस्तै बलिउडकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि यौन शोषणको शिकार बनेकी खबर बाहिरिएको छ । उनी हालै न्यूयोर्कमा भएको १० औँ वार्षिक महिला सम्मेलनमा सहभागि भएकी थिइन् । जसमा उनले यौन उत्पीडन भएको बनाएकी छन् । उक्त सम्मेलनमा चोपडाले यस विषयमा बोल्न कोही पनि लजाउन नहुने बताइन् ।
महिला सम्मेलनमा विश्वभरबाट सहभागि भएका महिलाहरुले महत्वपूर्ण मुद्धामा आ – आफ्नो विचार राखेका थिए । जस मध्य एक मुद्ध भने उत्पीडनको पनि थियो । जसलाई लिएर प्रियंका चोपडाले महिलासंग यौन उत्पीडनको शब्द जोडेर आउने उनलाई लागेको बताइन् ।
अब सबै महिलाहरुले एक अर्कामा साथ दिने भएकोले कोही पनी चुप चाप बस्न सक्दैन र यस्तो देख्दा एक दमै साहस आउने उनको भनाइ थियो । आफू पनि यौन उत्पीडनको शिकार बनेको उक्त कार्यक्रमा बताएको खबर भारतीय मिडिया दैनिक जागरणमा खबर छ । एक पटक हर कोहीले उक्त कुराको सामना गर्नु परेको हुन सक्ने प्रियंकले भनिन्। यस्तो विषयमा बोल्न उनलाई भन्न कुनै लाज नभएको उनले बताइन् ।
पछिल्लो समय यस विषयमा मुद्धा अगाडि बढाउन विश्वमा मिटु अभियन चालाइरहेको छ । बलिउड अभिनेत्री तनुश्रीले आफू पिडित भएको घटना मिटुमार्फत बाहिरा ल्याएकी थिइन् । त्यस्तै नेपालमा पनि सञ्चारकर्मी तथा महिला सशक्तीकरण नेपालकी अध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिले आफू पनि पीडित भएको मिटु अभियन मार्फत खुलासा गरेकी थिइन् ।
आतंकवादीलाई सहयोग नगर्न पाकिस्तान सरकारलाई एफटीएफकाे चेतावनी
राष्ट्रपति चुनावका लागि ट्रम्प मैदानमा
दुनियामै नभएका यस्ता बुबा जस्ले सन्तानको हत्या गरेर गाडीमा राखेर हप्ता दिनसम्म घुम्छ !
जापान बारे २० राेचक तथ्यहरू जुन तपाँइलाइ थाहा नहुन सक्छ ।
आठ दिनदेखि बेपत्ता भारतीय एएन ३२ जहाजको अवशेष भटियाे
आप्रवासीलाई नरोके मेक्सिकोमाथि उच्च भन्सार लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
ट्राफिकबाट बच्न जो ३० मिनेट नदीमा पौडिएर अफिस पुग्छन् !
अष्ट्रेलियाली धनाढ्यलाई आफुसंग घुमफिर गर्न कर्मचारी चाहियो , तलब मात्र ४० लाख !